Ngakho manje sibheka indlela "VKontakte" ukufihla vidiyo. Empeleni kulula kakhulu. Nokho, kukhona ezimbalwa izindlela futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kufanele kucutshungulwe. Ngaphezu kwalokho kuzilungiselelo zalo siqu ubumfihlo, sihlaziya nawe kanye nalabo izimo lapho udinga ukubona ividiyo ezifihliwe.
Njengoba "VKontakte" fihla amavidiyo? Ngaphambi okungukuthi kancane ukukhuluma ngalokhu lengosi ethile yezokuxhumana. Ngoba bhekani, njengoba sekuphawuliwe kakade, sizoba ukucabangela ezinye izinto kuhle ezithakazelisayo.
Ngakho, e-"VC" isiqophi ukudlala indima Ukugunda abavamile kakhulu kunethiwekhi. Kungaba amarekhodi akho siqu noma yonke amabhayisikobho. Kwanele ukuthi ezibekwe ekhasini lakho noma iqembu. Kusuka lapho, angahlala ukubuka. Into esemqoka - ixhunywe ku-intanethi.
Hhayi kudala esikhathini yokuxhumana unekhono ukuhlunga amavidiyo nge-albhamu. Lokhu lula umsebenzi, uma ucabanga kanjani ukufihla ividiyo "VC". Into wukuthi uma bezama ukucoshela-up kungenzeka ukuthi ukwazi ukusebenzisa zonke izinyathelo zomlando lonke.
Ukuze uqale, ake sicabange ngalokho udinga ukuthola indlela "VKontakte" ukufihla vidiyo.
Ukuze uqale, kumelwe ibhaliswe yokuxhumana. Ngaphandle kunzima ukusebenza zonke izici zitholakale kubasebenzisi. Ngemuva kwalokho, hamba ngokusebenzisa ukugunyazwa, futhi usukulungele uqhubeke ngqo nale nkinga.
Iphuzu lesibili ukuthi kuyafaneleka ukucabangela - kuba ilungelo kwevidiyo. Okungukuthi, ungakwazi ukufihla ezinamasondo kuphela lapho unaso salokhu "amalungelo". Iphrofayela yakho, umphakathi, lapho - umlawuli ... Kulapha siyaphi ukwenza.
Ngokwemvelo, endaweni yokugcina, kubalulekile umbuzo yethu khona ezinamasondo kule yokuxhumana. Thatha sihlolisise into Ngingathanda ukufihla, bese uqhubekela phambili ukuthatha isinyathelo esiwujuqu. Uma ngikhuluma iqiniso, yonke le nqubo ithatha wena esiphezulu imizuzu emihlanu. Nge lo msebenzi ukusingatha ngisho imfundamakhwela umsebenzisi.
Njengoba "VKontakte" fihla amavidiyo? Manje sizokwenza ukubhekana nale nkinga. Okokuqala, njengoba sekushiwo, kuzodingeka ukuba ungene ku-yokuxhumana. Kuphela ngemva kwalokho sizokwazi ukuba baphathe ngokugcwele ingxoxo mayelana nenqubo.
Iya iphrofayela yakho. Manje kubalulekile chofoza "Amavidiyo ami". Ekhasini elilandelayo ngeke ukuvula ama-albhamu atholakalela namavidiyo. Lokhu ukusebenza, kufanele bangene imodi. Ukuze wenze lokhu, ukhethe ukungena oyifunayo bese uchofoza isithonjana ipensela ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Manje iwindi umhleli lizovela. Ngo izilungiselelo zobumfihlo ngaphansi "Ubani ongabona ividiyo" ukubeka "Yimi kuphela". Londoloza izinguquko, futhi yilokho kuphela. Manje le vidiyo kuwe kuphela. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ulifihle kusuka abangane noma izigaba ezithile abasebenzisi okungagunyaziwe. Inkinga ayisekho. Manje wazi kanjani "VKontakte" ukufihla vidiyo. Lokhu, njengoba ungabona, kulula kakhulu. Khumbula ukuthi uma ungeza ividiyo entsha ungakwazi ngokushesha usethe izilungiselelo zobumfihlo. Lokhu kuzokusiza ukuba bagweme izinkinga ezingadingekile esikhathini esizayo.
Noma kunjalo, abasebenzisi abaningi bafuna ukwazi indlela ongabona amavidiyo afihlekile zokuxhumana. Empeleni kukhona impendulo eyodwa vo, futhi umsebenzi akuyona ngaso sonke isikhathi. Lokhu - hhayi ukuthi abanye, njengoba ukusetshenziswa Sebawoti ekhethekile ukunikezela le nsizakalo.
Udinga nje faka ikheli sephrofayela oyithandayo. Ngemva kwalokho, chofoza "Buka", nezilungiselelo zobumfihlo kuzosuswa. Yilokho. Njengoba ubona, lutho nzima noma imilingo.
Shintshela router Virtual: ukuthi ungasetha kanjani ohlelweni?
Ukusebenza 2016: isipiliyoni oyigugu ochwepheshe
Blocks - ke ... 1Q. ikota yesibili
Recipe salting salmon
Pate - a pate noma pie? Amaqiniso ethakazelisayo isidlo kanye zokupheka ukupheka
Proper imimese skates
Ukuhambisana usayizi 36 ubukhulu izingubo - it is a Russian?